Dib-u-heshiisiin - waa maxay? , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Waxaan wacdiyeyaasha u leenahay caado ah in mararka qaar la isticmaalo ereyo ay dad badan, gaar ahaan kuwa Masiixiyiinta ah ee cusub ama booqdayaasha, aysan si fudud u fahmin. Waxaa la i xasuusiyay baahida loo qabo in la qeexo tibaaxaha ka dib khudbadii aan dhowaan bixiyay markii qof ii yimaado oo iga codsaday inaan sharxo ereyga "dib-u-heshiisiin". Waa su’aal wanaagsan oo haddii qofku leeyahay su’aashan waxaa laga yaabaa inay qusayso kuwa kale. Sidaa darteed waxaan jeclaan lahaa inaan barnaamijkan ugu hibeeyo fikradda kitaabiga ah ee "dib-u-heshiisiinta".
Intii lagu jiray taariikhda bini-aadamka intooda badan, dadka intiisa badani waxay ku sugnaayeen xaalad ka-go'naan xagga Ilaah. Waxaan haynnaa caddeyn ku filan warbixinnada qaladka bini aadamka si aan ula tacaalno, taas oo si fudud uga tarjumeysa ka-goynta Ilaah.
Sidii uu rasuul Bawlos u qoray Kolosay 1,21: 22: “In kastoo aad shisheeyayaal ah oo cadowgoodana xumaanta ku jirteen, haatan wuxuu idinkula heshiiyey dhimashadiisa dhimashadiisa, inuu isagu quduus noqdo oo eedla'aan iyo eedla'aan idiin noqdo. Weji ka waji. ”
Marna ma ahayn Ilaah kan u baahnaa in nalala heshiiyo, waxay ahayd in lala heshiiyo Ilaah. Siduu Bawlos yidhi, go'doominta waxay ku jirtay maskaxda aadanaha, ee ma fikirka Ilaah. Jawaabta Ilaah ee ka fogaanta aadanuhu wuxuu ahaa jacayl. Ilaah xitaa wuu na jeclaa markii aan cadaawayaashiisa ahayn.
Bawlos wuxuu u qoray kuwa soo socda kaniisadda Rome: "Sababtoo ah haddii aan Ilaah la heshiisiinay dhimashadii wiilkiisa markii aan weli cadowsan nahay, intee in ka badan ayaa nolosheenna badbaadin doonnaa hadda kadib markii aan heshiisiinno" (Rooma 5,10).
Bawlos wuxuu noo sheegayaa inaysan halkaa ku joogsanaynin: “Laakiin waa Ilaaha inagula heshiiyey naftiisa Masiixa oo ina siiyey xafiis ku wacdiya dib u heshiisiinta. Maxaa yeelay, Ilaah wuxuu ku jiray Masiixa, oo dunida ayuu la heshiiyey, oo ma uu tirin dembiyadooda iyaga ka gees ah ... " (2 Korintos 5,18: 19).
Dhowr Aayadood ka dib, Bawlos wuxuu qoray sida Ilaah ee Masiixa kula heshiisiiyay adduunka oo dhan naftiisa: "Maxaa yeelay, waxaa Ilaah ka farxiyay in wax kasta oo isaga ku dhex jira oo isaga ku dhex jira, isaga wax walbana kula heshiin doona, ha ahaato dhulka ama wixii ku jiraba. Jannada adoo nabad ku samaynaya dhiigiisa iskutallaabta " (Kolosay 1,19: 20).
Isaga xagga Ciise, Eebbe wuu kula heshiiyey dadka oo dhan, taas oo macnaheedu yahay in qofna aan laga reebin jacaylka iyo awoodda Ilaah. Meel kasta oo weligeed ku dhex taal miiskii Ilaah ayaa lagu kaydiyey meel. Laakiin qof walbana ma rumaynin ereyga jacaylka iyo cafiska ee iyaga ku jira, dhammaantood ma aqbalaan noloshooda cusub ee Masiixa, waxay xidhaan dharka arooska ee Masiixu iyaga u diyaariyey, oo waxay fadhiyeen miiska.
Sababtaas ayaa ah sababta dib-u-heshiisiintu ay khatar ugu jirto - waa shaqadeena inaan faafinno warka wanaagsan ee ah in Ilaah mar hore la heshiisiiyay adduunka naftiisa isaga oo adeegsanaya dhiiga Masiixa iyo wixii ay u baahan yihiin aadanaha oo dhan inay sameeyaan wuxuu rumeysan yahay injiilka, inuu toobadkeeno xagga Ilaah, iskutallaabta kor u qaado oo uu raaco Ciise.
Iyo warkii cajiibka ahaa ee taas la mid ah. Ilaahay ha inaga wada barakeeyo hawshiisa farxadda leh.